आफू डलरले टिल्ल भएर अरूलाई डलरिया भन्न पनि सुहाउँछ र? | Small Steps
अब आउनुहोस् डलरको छोटो चर्चा गरौ। डलरलाई कसरी हेर्ने? हाम्रो हेराइले फरक पार्छ। नेपालको राज्य सम्यन्त्रदेदि लिएर कार्यपालिका, न्याय पालिका, लोक सेवा सबै क्षेत्रमा कसको पहुँच छ? देशको डाडु पुन्यु कसको हातमा छ? दातृ राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध कसले राख्छ? युरोपसँग हातेमालो कसले गर्छ? हाम्रो गाउँमा रहेको हलो जोत्ने पास्टरहरूले कि देशका ठालुहरूले? देशको अर्थतन्त्र नियन्त्रण कसले गरेको छ? सासाना विकासे संस्थाहरूले गाउँमा एउटा धारा बनाउनकालागि दातृ राष्ट्रको सहयोग ल्याउँन परे त समाज कल्याणले घाटी निचोर्छन् भने कताबाट आयो यति सस्तो डलर? कहिलेकाहि मलाई समाज कल्याणको नाम समाज घाटी थिचान भन्न मन लाग्छ। भनाइ छ नि “जो होचो उसकै मुखमा घोचो” एक किसिमले सही हो। अल्पमतमा हुनेहरू पेलिएका छन्। उनीहरूमाथि अन्याय अत्याचार गरेर बहुसंयकहरूकै ठूलो स्वर देखिन्छ। गाइ मार्ने जेलमा जान्छ अनि मान्छे मार्नेले सत्ता चलाउँछ। प्रश्न सोध्न मन लाग्छ हामीलाई किन जेल चाहिँयो?
वास्तव मै भन्ने हो भने डलर नखाने नेपालमा कोही पनि छैन। कहाँबाट आउँछ? सित्तैमा पोलियोको थोपा? भिटामिन ए को क्याप्सुल? किन लिनुहुन्छ कृषि विकासको रिन? किन लिनुहुन्छ विश्व व्यङ्कको रिन? कसले बढी खाएको छ डलर? सरकारले? कि चर्चले? कसरी भन्नुहुन्छ हिन्दुले डलर खाएको छैन भनेर? किन लिनुहुन्छ टिबीको चक्की सित्तैमा? देशको कुनचाहिँ संस्था पहिलो मुलुकहरूको सहयोग विना चलेको छ? कसले बनाएको नेपालको प्राय जसो राजमर्गहरू? कुनचाहिँ समूह डलरबाट अछुत छ? नागरिकता हुँदाहुँदै पनि अरबौ डलर पचाउन भरखरै मतदाता परिचय पत्र बनाउनुभएन र? सरकारले जुन डलर ल्याउँछ। बास्तवमा त्यो चर्चले पाएको भए हाम्रो देशको मुहार ५ वर्षमा फेरिने थियो। चर्च मात्र यस्तो संस्था हो जसका सदस्यहरूले सक्रिय भएर मेहेनत गर्न सिकाउँछन्। मानिसहरूले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत चर्चलाई दिन्छन्। सोबाट जम्मा भएको पैसाबाट समाजमा भएको निर्धाह अनि असाहयलाई सहायता गर्छन् र चर्चमा सेवा गर्ने मानिसहरूलाई तलव दिन्छन्। अनि इमानदार भएर सरकारलाई कर तिर्न सिकाउँछन्। देशको असल नागरिक बन्न सिकाउँछन्।
डलर खाने भनेर मात्र हुँदैन। कहाँबाट चुहेर कसले डलर खायो? कसरी कहाँबाट डलर चुहुन दिनुभयो? कुनचाहिँ चर्चले वा व्यक्तिले देशको नियम उलङ्घन गरेर डलर खायो औल्याउनु पर्यो अनि भन्नु पर्यो डलर खाने भनेर। आफ्नो लाज ढाक्नलाई के ती आफ्नो पक्षमा बोल्न असक्तहरूलाई वली बनाउनु पनि धर्म हो र? यो त आफू डलरमा टिल्ल मातेर अरूलाई डलरिया देखे जस्तो भएन र? जसरी जड्याहहरूले गर्छन् नि। कुरै नबुझी डलर खाने भन्दै उफ्रेर पनि भाइचाराको विकास होला र?
← LIFE IN YAKVILLE
के तपाई अचारको भरमा त जिउँदै हुनुहन्न? →
6 thoughts on “आफू डलरले टिल्ल भएर अरूलाई डलरिया भन्न पनि सुहाउँछ र?”
Chhejap Thikepa Lhomi
गहिरीएर अध्‍ययन नगर्ने जे मनमा लाग्‍यो प्‍याच्‍च बोलेर अरुको बिचार, बिस्‍वास, मुल्‍य मान्‍यतालाइ कहा कसरी आच पर्छ भन्‍ने ख्‍यालै नगर्न बानी सारै नमिठो हुन्‍छ यो लेख पनि संघ सस्‍था, इसाइ, आदिवासी जनजाति सबैलाइ यस्‍तै आरोप लगाउछन। होला एक दुइ जना तर सबै त्‍्यस्‍तो होइन। त्‍्यसो हो भने नेपाल सरकार किन मुख दर्शक बनेर बसेको। नियम कानुन लगाएर कार्बाइ गरे भइहाल्‍यो नि। देशमा कानुन के छ। डलर कै कुरा गर्ने हो भने ब्‍यक्‍ति बिशेष वा सस्‍थालाइ छोडीदिउ देशको बजेट डलर दिने सहयोगी दातामा भर परेको हुनछ यदि बिदेसीहरुको सहयोग छैन भने नेपाल सरकार एक दिन पनि टिक्‍न सक्‍दैनन बरु सही सदुपयोग र सम्‍बन्‍धीत बिपन्‍न परिवारकहा पुग्‍नु पर्छ।
मलाई माफ गर्नुहोला है यो झगडाको छोटो यात्राकोलागि। कतिपय, मित्रहरूको सोच अति नै साघुरिएको र ख्रीष्टियनहरूलाई सताउन र दवाउन संगठन खोल्नुका साथै धर्म डलरमा किनबेच जस्ता आरोप लगाउन थालिएकोले जवाफ स्वरूप लेखेको हुँ। सायदले यो कुराले उहाँहरूलाई फराकिलो सोच राख्न टेवा पुगेको होस्। इसाइ बढ्नुमा डलरको हात छ भन्ने कुरामा बाइबल पढ्ने ख्रीष्टियनको त के कुरा, फराकिलो विचार राख्नु हुने हाम्रा बुद्धिष्ट मित्रहरू, हिन्दु मित्रहरूले पनि विश्वास गर्नुहुन्न।
तपाईको आफ्नो सल्लाह र सुझावहरूले मलाई अघि बढ्न प्रेरणा मिल्छ।
Ramro lagyo lekh dai. Parmeshor le tapaiko sewakai ma aashish diun.
यो त आफू डलरमा टिल्ल मातेर अरूलाई डलरिया देखे जस्तो भएन र? जसरी जड्याहहरूले गर्छन् नि। कुरै नबुझी डलर खाने भन्दै उफ्रेर पनि भाइचाराको विकास होला र?
राम्रो लाग्यो यो लेख।
साथीले लेखेको चाहिँ चित्तबुझ्दो र वास्तविक देखिन्छ। राष्ट्रको माया गर्ने थोरै मात्रै छन् 1.4% दुखलाग्दो कुरा।
….50% मात्रै जागे भने पनि देशमा तीब्र बिकास हुन्छ